မှတ်ဥာဏ် 'လှည့်ကွက်' သည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုသက်သာစေသည် - Brain On Porn
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အမှတ်တရများပြောင်းလဲ relapsing ထံမှဟောင်းစွဲရပ်တန့်နိုင်ဘူး။
သုတေသီများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအားပြန်လည်ကုသခြင်းမှအခြားဆေးဝါးများမသုံးဘဲပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏မှတ်ဉာဏ်အားနည်းစေခြင်းဖြင့်စွဲလမ်းသူများ၏အပြုအမူကိုပြုပြင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုကိုသက်သာစေပြီးပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါး၏သက်ရောက်မှုများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးသည့်စက်ပစ္စည်းများနှင့်အချို့သောပတ်ဝန်းကျင်တို့နှင့်ဆက်စပ်လေ့ရှိပြီး၎င်းသည်ထိုအခြေအနေများနှင့်ကြုံတွေ့ရပါက၎င်းတို့အားပြန်လည်ထူထောင်ရန်အားနည်းစေနိုင်သည်။ ပေကျင်းရှိပီကင်းတက္ကသိုလ်မှအမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုအင်စတီကျုမှလင်းလူးမှလေ့လာခဲ့သည့်နည်းစနစ်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏မှတ်ဉာဏ်ကိုခေတ္တပြန်လည်ရှင်သန်စေပြီးထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ခြင်း၏ 'မျိုးသုဉ်းခြင်းဆိုင်ရာ' နှင့်အတူလိုက်နာခြင်းဖြင့်ထိုဆက်သွယ်မှုကိုချိုးဖျက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ တူညီတဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကို။
မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေ၏တိုတောင်းသောသတိပေးမှုသိုလှောင်မှုထဲကမှတ်ဉာဏ်ကို ယူ. လွယ်ကူ overwrite လုပ်ပုံရသည်။
Marianne Williams ကဓါတ်ပုံပညာ / Getty Images
တည်ဆဲကုထုံးစွဲဥပမာ, လူမျိုး၏ဗီဒီယိုများထိုးသွင်းမဟုတ်, မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာနေချိန်တွင်သူတို့ကိုဆေးထိုးပိုက်ကိုကိုင်တွယ်ရှိခြင်းသူတို့ကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံသူတို့ရဲ့အလေ့အထနားမလည်ဖို့ကူညီနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဒါကဆေးခန်းများတွင်မတရားသောလျော့ကျစေပါတယ်, ဒါပေမယ့်မရစွဲသူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်သို့ပြန်လာသည့်အခါ။ ကြွက်များတွင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည်အခြားချဉ်းကပ်မှုအတိတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အမှတ်တရများကိုပြောင်းလဲမှတ်ဉာဏ်-blocking မူးယစ်ဆေးသုံးပြီးပေမယ့်ဒီလူသားတွေအတွက်အသုံးပြုရန်အတည်ပြုကြသည်မဟုတ်ပတျသကျတယျ။
ဒီနည်းစနစ်ရဲ့ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ Lu နဲ့သူ့အဖွဲ့ကဒီနည်းလမ်းကို memory reconsolidation လို့ခေါ်တယ်။ ပြန်လည်စုစည်းခြင်းကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုရေရှည်သိုလှောင်ခြင်းမှပြန်လည်ရယူပြီးမှတ်ဉာဏ်အားကောင်းစေရန်ပြန်လည်အသက်သွင်းသည်။ ပြန်လည်ရယူပြီးနောက်သတင်းအချက်အလက်သည်ယာယီတည်ငြိမ်မှုမရှိသောကြောင့်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့အလုပ်အတွက်ဒီနေ့ထုတ်ဝေသည် သိပ္ပံ1.
သူတို့မြင့်မားတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါင်းသင်းသင်ယူနိုင်အောင်မူးယစ်ဆေးအမှတ်တရများထုတ်ရှင်းလင်းဖို့ reconsolidation သုံးစွဲဖို့, Lu နဲ့သူ့အဖွဲ့ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်စီမံခန့်ခွဲကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူမှကြွက်များသင်ပေးတယ်။ အဆိုပါသုတေသီများထို့နောက်ပေမယ့်မရရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်းမူးယစ်ဆေးမရှိဘဲ, တူညီတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကြွက်ထားတော်မူ၏။
သူတို့က, 15 မိနစ်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး-ယူပြီးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ထား 10 မိနစ်ကနေဖယ်ရှားပြီးတော့3နာရီပြန်ရောက်ခဲ့ကြပါလျှင်ကြွက်အနည်းဆုံးမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူပြသခဲ့သည်။
ထို့နောက်သုတေသီများလူသားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကဘိန်းဖြူဘိန်းဖြူသုံးစွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး paraphernalia ၏ရုပ်ပုံများကိုတစ်5မိနစ်ဗီဒီယိုကို addicts, ဖြစ်စေတစ်နာရီကြာမျိုးသုဉ်း session တစ်ခုမတိုင်မီ 10 မိနစ်သို့မဟုတ်6နာရီ, သူတို့ထပ်တလဲလဲတူညီသောပုံရိပ်တွေထိတွေ့ခဲ့ကြရသောပြသခဲ့သည်။
အဆိုပါမျိုးသုဉ်း session ကိုပြသမတိုင်မီဗီဒီယို 10 မိနစ်ပြသသူစွဲခြောက်လအကြာမှာအဲဒီ session စဉ်နှင့်အထိနှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးမတရားသောလျော့နည်းသွား, Lu ကပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ session မတိုင်မီဗီဒီယို6နာရီစောင့်ကြည့်သောသူတို့အားအတွက်မတရားသောမသိသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။
အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အကျဉ်းချုပ်ကိုထိတွေ့ကြိုတင်လွယ်ကူမူးယစ်ဆေးယူပြီးနှင့်မြင့်မားသောရတဲ့၏တွေကိုအကြား link ကိုဖျက်ပစ်ရန်နှင့်မျှထိုကဲ့သို့သော link ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သောအတွက်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူကအစားထိုးအောင်, မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ၏မှတ်ဉာဏ် reactivates ထင်ပါတယ်။
သင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှုတစ်လျှောက်လုံးဆေးရုံတင်ခဲ့ကြသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်စွဲဘို့ relapse တားဆီးမယ်လို့ရှိမရှိစမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
နယူးယောက်တက္ကသိုလ်မှအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် Liz Phelps ကဤလေ့လာမှုသည်ကြွက်များနှင့်လူသားများအတွက်ကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက်များပါဝင်သောအလွန်ကောင်းမွန်သောလေ့လာမှုဖြစ်သည်။
2010 ခုနှစ်, Phelps နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှတ်ဉာဏ် reconsolidation ကြောက်အမှတ်တရများ  ငြိမ်းအေးဖို့အသုံးပြုနိုင်ပြသခဲ့သည်။ နောက်မှသူတို့ကကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်စတုရန်းမှတုန့်ပြန်သောကြောင့်သူတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုများတွင်ပါဝင်သူများထပ်တလဲလဲ, လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်ပျော့လျှပ်စစ်လှုပ်လက်ခံရရှိနေစဉ်အပြာစတုရန်းပြသ, ထိုသူနှစ်ယောက်လှုံ့ဆော်မှုပေါင်းသင်းသင်ယူခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုပြီးရင်လှုပ်လက်ခံရရှိခြင်းမရှိဘဲပြန်စတုရန်းပြသခဲ့ကြသည်။ တချို့ကခေတ္တ 10 မိနစ်ဤဒုတိယအဆင့်တွင်ရှေ့တော်၌ထိုစတုရန်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဤသည်နှင့်အတူဝငျရောကျစှကျနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှတ်တရများအားနည်းရာ reconsolidation, မှုကိုခံလိုက်ရတယ်။ နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်အကြားအတော်လေးအကျဉ်းကြားကာလရှိခဲ့လျှင်တဖန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
“ ဒီနည်းစနစ်ဟာလက်တွေ့အခြေအနေဒါမှမဟုတ်ရှုပ်ထွေးပြီးတကယ့်ဘဝအခြေအနေတွေမှာထိရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ခဲ့ဘူး” ဟုဖဲလ်ပ်ကပြောသည်။ သူမလူး၏ရလဒ်များကြောင့်“ အလွန်အံ့အားသင့်သွားသည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
lu ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထပ်ရေရှည်မှာ relapsing ကနေစွဲတားဆီးအံ့သောငှါကပြောပါတယ်။ သူနဲ့သူ့အဖွဲ့ကနောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, နှင့်ချဉ်းကပ်ထိုကဲ့သို့သောအရက်နှင့်နီကိုတင်းကဲ့သို့သောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများသက်ဆိုင်လျှင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။
အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလည်းထိုကဲ့သို့သော Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအဖြစ်အခြေအနေများကုသမှုအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သူကကျယ်ပြန့်အသုံးပြုရန်အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်မတိုင်မီအလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာလက်ရှိကုထုံးနှင့်အတူသစ်ကို technique ကိုပေါင်းစပ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ပါလိမ့်မယ်, Phelps ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့အလွန်သိမ်မွေ့ကိုင်တွယ်ပါတယ်။ "
နှစ်: 10.1038 / nature.2012.10442
Xue, Y.-X. et al။ သိပ္ပံ 336, 241-245 (2012) ။
ခီလာဃ et al။ သဘာဝတရား 463, 49-53 (2010) ။
<>ဆောင်းပါးPubMedပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISIChemPortShow ကိုအခြေအနေတွင်